युगसम्बाद साप्ताहिक - नयाँ भनेको इतिहासै मेट्नु हो ?
Sunday, 01.26.2020, 11:26pm (GMT+5.5) Home Contact
नयाँ भनेको इतिहासै मेट्नु हो ?
Tuesday, 08.15.2017, 02:41pm (GMT+5.5)
मुलुकको शासनको नाम, शासक र तहहरुको नाम बदल्दैमा मुलुक बदलिन्छ ? हो बदलिनुपर्ने हो तर, नेपालमा शासक मात्र बदलिने परिस्थिति नबदलिने भैरहेको छ । २०६२।०६३ पछि एकथरिले यहाँ गणतन्त्र ल्यायौं, ठूलो परिवर्तन ल्यायौं भनेर हल्ला गरे तर तिनीहरु आफैं बदलिएनन् । हिजो हुँदाखाने र हुने खानेकाबीच अनि सत्तामा बसेका र सत्ता कब्जा गर्न तम्सेकाबीच झगडा थियो, आज पनि छ । यो कुनै परिवर्तन होइन, बरु थप समस्या हो । एकले अर्कालाई नसहने प्रवृत्ति हो, परिवर्तन होइन । आफूले भनेजस्तो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने जिद्दीलाई परिवर्तन मान्न सकिंदैन । यहाँ यथार्थ छोपिएको छ । हिंसात्मक आन्दोलनबाट पार नलाग्ने देखेर माओवादीलाई परिस्थितिले सुरक्षित अवतरण गरायो, त्यहाँसम्म ठिकै थियो ।
कही नेताको उत्ताउलोपनका कारण केही प्रतिष्ठित र सम्पन्न सीमित जातिलाई राज्य बाँड्छौं भनेपछि अरु विभिन्न जाति, धर्म र सम्प्रदायका जनता दच्किनु स्वाभाविक भयो । त्यसमा पनि पारीबाट केके केके अधिकार सहितका राज्यका माग हुन थाले, नभए बिखण्डनका धम्की समेत आउन थाले । त्यतिले नि नपुगेर नाकाबन्दीको झाँकी समेत देखाइदिएपछि जे आशंका थियो त्यसको झनै पुष्टि भयो । त्यति मात्रै नभएर विभिन्न जातजातिबीचको सद्भभाव र सहिष्णुता, असमझदारी एवं पास्परिक अविश्वास समेत बढ्दै गएको छ । असमानता र विभेद समाप्त पार्न भनेर तल्लो तहलाई भड्काउने र्गले नै आफू अधिकारसम्पन्न हुनासाथ तल्लो तहलाई छोडिदिंदो रहेछ । विशेषा सुविधा र अधिकार प्राप्त वर्ग चाहे ती कर्मचारी, व्यापारी या राजनीीतिक व्यक्ति नै किन नहोउन्, आफ्ना अधिकार खुम्च्याउन चाहँदैननु । त्यसैले गर्दा यहाँ कुनै पनि सुधार हुन पाएको छैन ।
यहाँको राजनीति सधैं दिशाहीन छ । प्र्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएर मात्रै पनि नहुने रहेछ । ती सबै अधिकार बलियाका मात्र हतियार भएका छन्, उनीहरुले नै स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । आज पाखुरेहरुकै तानाशाही चलेको छ । नियम–कानुन पाखा लागेका छन् । राजनीतिक पागलपन मात्र छ । प्रजातज्त्र नै संकटमा र जनता नै संकटमा छन् । त्यसैले समाज रुपान्तरण गर्ने हो भने सर्वप्रथम जनता प्रबुद्ध हुने शिक्षा चाहिन्छ । प्रबुद्ध समाजमा मात्र जीवन सुखमय हुनसक्छ । प्रचलित शिक्षा मानवीय मूल्यको विकासमा सहयोगी हुन नसकेको तीतो अनुभव सबैलाई भएकै हुनुपर्छ । आजको शिक्षाले समाजमा विषमता थपेको हुनाले परिवर्तनको आवश्यकता सम्झिएको छ ।
“हर्रो नपाउँदो– जाइफल धाउँदो” भनेझैं आज जनतालाई ससाना, तर नभै नहुने कुराले समस्या परेको छ, मन्त्रीहरु भने ठूलठूला भाषण मात्र सुनाइरहेका छन् । बाढी–पहिरो पीडित हाहाकारमा छन् । राहत र उद्धारका लागि निर्देशनको भाषणबाजी मात्रै भैरहेको छ । जनताको दैनिकी कष्टकर छ । कालाबजारिया तस्करले छुट पाएका हुनाले ठूलाबडालाई खाँचो नभएपछि जनताको खोजी कसले गर्ने ? आठ दशजना ठूला व्यापारीले कार्टेलिङ गरेर बजार भाउ उरालेका छन्, कृत्रिम अभाव गराएका छन् । सरकार तिनै ठूला व्यापारीका प्रभावमा छ भने सरकार र नियम कानुन हुनुको अर्थ के रह्यो ? यस्तो अराजक स्थिति जनतालाई भोगाएर कहिलेसम्म राज्य चलाइने हो कुन्नि ! राजधानीको त यस्तो हालत छ भने जिल्ला–गाउँघरको स्थिति अझ कस्तो होला ? जनताका पीडा सहिनसक्नु अवस्थामा छन्, सरकार भने उसको कुनै दायित्व नै छैन जस्तो व्यवहार देखाउँदै आएको छ ।
गणतन्त्र भनेपछि लुट मच्चाउने स्वतन्त्रता सम्झिएको हो कि कुन्नि, विकास निर्माणका नाममा विध्वंश मात्रै छ । सडकका खाल्डाले मान्छेको ज्यान लिंदा समेत आँखा खुल्दैन । सायद यही होला नयाँ नेपाल भनेको । त्यस्तै महापुरुषका ऐतिहासक शालिक भत्काएर जाति विशेषका शालिक ठड्याइन्छन्, जाति जातिबीच द्वन्द्व सिर्जना गराइन्छन् । यस्तो कामसद्भावका लागि हो कि दुर्भावनाका लागि ? एउटाका नामको अस्पताल, कलेज, सडक या टोलको नाम कसैको देनका आधारमा राखिएको हुनसक्छ । त्यसलाई मेटेर अर्काको नाम राख्नु त कायरता हो ।
ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षण त कताकता, उल्टै तोडफोड गर्नु बहादुरी होइन । काठमाडौं महाराजगंजस्थित पञ्चायत रजतजयन्ती पार्कको नाम त फेरे फेरे, अहिले त्यहाँ गएर हेर्नोस् त, पार्कको दुर्दशा ? त्यस्तै थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कको हालत पनि दयनीय छ । चक्रपथको ग्रिनबेल्ट नै बेबारिसे सम्पत्ति भए हिनामिना भएको छ । ‘काम गर्ने कालु–मकै खाने भालु’ भनेझैं देनदिने एउटा, नाम टाँस्ने अर्को हुने हो भने ऐतिहासिक सम्पत्तिको संरक्षण कसरी हुन्छ ? इतिहास नै मेटाउने हो भने हाम्रो आफ्नो भन्ने चीज के रहला ? राज्य बाँडेर भुरेटाकुरे राजा हुने रहर बोकेकाहरुको दूषित मनसाय त पूरा होला, तर सिंगो नेपालको अस्तित्व भने खतरामा पर्नेछ । जातित्वको आधार खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा नबिर्सौं ।